အလွန်ထူးဆန်းပြီး လူအသက်များစွာကို ဆုံးရှုံးစေခဲ့တဲ့ ရေကန်ကြီးများ – Tameelay
အလွန်ထူးဆန်းပြီး လူအသက်များစွာကို ဆုံးရှုံးစေခဲ့တဲ့ ရေကန်ကြီးများ
တကယ်ကိုထူးဆန်းပြီး ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ ရေကန်တွေ….
ရေကန်ဆို လူတိုင်းမြင်ရင်သဘောကျပါတယ်။ ပြာလဲ့ကြည်လင်နေတဲ့ ရေနဲ့ လှပတဲ့ရှုခင်းပေါင်းစပ်ထားပြီဆို အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရေကန်ုတိုင်းဟာအန္တရာယ်ကင်းပါ့မလား?
ကိုယ့်မျက်လုံးကိုယ် မယုံနိုင်ဖြစ်သွားလား? ပန်းရောင်ကာလနဲ့ တောနက်ထဲရှိ ရေကန်ကို မြင်တာနဲ့ကြက်သီးထသွားမယ်ဆိုတာသိကြမှာပါ။ ဒီရေကန်ထဲက ပန်းရောင်ရေတွေဟာ ကွဲပြားတဲ့ဇီဝသက်ရှိတွေကနေလာတာလို့ သိရပါတယ်။
Kawah Ijen Acidic Lake (Indonesia)
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အက်ဆစ်ဓာတ်အများဆုံး ရေကန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသေစေနိုင်လောက်တဲ့ ရေတွေဟာ ညဘက်ဆိုရင် ထူးဆန်းစွာဖြင့် အပြာရောင်တွေထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုနေရာမှ ဒေသခံတွေကတော့ မျက်နှာဖုံးတွေတောင်မတပ်ဘဲ ကန့်တွေကို လိုက်စုနေတာတွေ့ရပါတယ်။
A sudden lake: Gafsa (Tunisia)
နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပဲ ဒီရေကန်ဟာ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ကန္တာရမှာ ရုတ်တရက် ထူးဆန်းစွာပေါ်လာတဲ့ ရေကန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ရုတ်တရက်ပေါ်လာလည်း ဆိုတာတော့ သေချာမသိရသေးပါဘူး။ ရေဆင်းကူးမယ်ဆို စွန့်စားလွန်းရာရောက်ပါတယ်။ ရေကန်အနီးနားက ဖော့စဖိတ် မိုင်းတွေရဲ့ရေဒီယိုသတ္တုကြွတွေကြောင့် ကန်အတွင်းက ရေတွေမှာအဆိပ်တွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
The Boiling Lake (Dominica)
ဒီရေကန်ဟာ အမြဲတမ်းဆူပွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရေရဲ့အပူချိန်က 92°C ရှိပါတယ်။ ထိုရေကန်ဟာ လုံးဝကိုတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရေကန်ဟာ မီးတောင်အနီးမှာတည်ရှိနေတာကြောင့် ရေဟာအလိုလျောက်ပူနေတာဖြစ်တယ်လို့ သိပံ္ပပညာရှင်တွေက ရှင်းပြထားပါတယ်။
Killer Lake Nyos (Cameroon )
ဒီရေကန်ကြောင့် လူပေါင်း ၁၇၄၆ယောက်သေဆုံးသွားပါပြီ။ ၁၉၈၅ခုနှစ် သြဂုတ်လ၂၁ရက်နေ့က ထိုရေကန်အနားမှာ သေစေနိုင်တဲ့ ဂတ်စ်တွေပေါ်လာပြီး သက်ရှိသတ္တဝါတွေအားလုံးကို သေစေခဲ့တယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာချက် ကတော့ ရေကန်ဟာ မီးတောင်အောက်ခြေမှာရှိနေတာကြောင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေဟာ ရေထဲပျော်ဝင်သွားပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်တော့ ဂတ်စ်အငွေ့တွေအဖြစ် ကောင်းကင်ပေါ်သို့ပျံတက်သွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တကယျကိုထူးဆနျးပွီး ကွောကျဖို့ကောငျးတဲ့ ရကေနျတှေ….
ရကေနျဆို လူတိုငျးမွငျရငျသဘောကပြါတယျ။ ပွာလဲ့ကွညျလငျနတေဲ့ ရနေဲ့ လှပတဲ့ရှုခငျးပေါငျးစပျထားပွီဆို အတိုငျးထကျအလှနျပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ရကေနျုတိုငျးဟာအန်တရာယျကငျးပါ့မလား?
ကိုယျ့မကျြလုံးကိုယျ မယုံနိုငျဖွဈသှားလား? ပနျးရောငျကာလနဲ့ တောနကျထဲရှိ ရကေနျကို မွငျတာနဲ့ကွကျသီးထသှားမယျဆိုတာသိကွမှာပါ။ ဒီရကေနျထဲက ပနျးရောငျရတှေဟော ကှဲပွားတဲ့ဇီဝသကျရှိတှကေနလောတာလို့ သိရပါတယျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ အကျဆဈဓာတျအမြားဆုံး ရကေနျဖွဈပါတယျ။ ထိုသစေနေိုငျလောကျတဲ့ ရတှေဟော ညဘကျဆိုရငျ ထူးဆနျးစှာဖွငျ့ အပွာရောငျတှထှေကျနတောကိုတှရေ့ပါတယျ။ထိုနရောမှ ဒသေခံတှကေတော့ မကျြနှာဖုံးတှတေောငျမတပျဘဲ ကနျ့တှကေို လိုကျစုနတောတှရေ့ပါတယျ။
နာမညျနဲ့လိုကျအောငျပဲ ဒီရကေနျဟာ ခွောကျသှနေ့တေဲ့ ကန်တာရမှာ ရုတျတရကျ ထူးဆနျးစှာပျေါလာတဲ့ ရကေနျဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ ရုတျတရကျပျေါလာလညျး ဆိုတာတော့ သခြောမသိရသေးပါဘူး။ ရဆေငျးကူးမယျဆို စှနျ့စားလှနျးရာရောကျပါတယျ။ ရကေနျအနီးနားက ဖော့စဖိတျ မိုငျးတှရေဲ့ရဒေီယိုသတ်တုကွှတှကွေောငျ့ ကနျအတှငျးက ရတှေမှောအဆိပျတှပေါဝငျနိုငျပါတယျ။
ဒီရကေနျဟာ အမွဲတမျးဆူပှကျနတောဖွဈပါတယျ။ ရရေဲ့အပူခြိနျက 92°C ရှိပါတယျ။ ထိုရကေနျဟာ လုံးဝကိုတားမွဈထားတာဖွဈပါတယျ။ ရကေနျဟာ မီးတောငျအနီးမှာတညျရှိနတောကွောငျ့ ရဟောအလိုလြောကျပူနတောဖွဈတယျလို့ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ ရှငျးပွထားပါတယျ။
ဒီရကေနျကွောငျ့ လူပေါငျး ၁၇၄၆ယောကျသဆေုံးသှားပါပွီ။ ၁၉၈၅ခုနှဈ သွဂုတျလ၂၁ရကျနကေ့ ထိုရကေနျအနားမှာ သစေနေိုငျတဲ့ ဂတျဈတှပေျေါလာပွီး သကျရှိသတ်တဝါတှအေားလုံးကို သစေခေဲ့တယျ။ သိပ်ပံပညာရှငျတှရေဲ့လလေ့ာခကျြ ကတော့ ရကေနျဟာ မီးတောငျအောကျခွမှောရှိနတောကွောငျ့ ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျတှဟော ရထေဲပြျောဝငျသှားပွီး မကျြနှာပွငျပျေါရောကျတော့ ဂတျဈအငှတှေ့အေဖွဈ ကောငျးကငျပျေါသို့ပြံတကျသှားတာဖွဈနိုငျပါတယျ။
သင်ကဘယ်လို ဖခင်မျိုးလဲ? သင်အလုပ်မှ အိမ်ပြန်လာလျှင် သင့်ကလေးငယ်လေးတွေသင့်ဆီပြေးလာကြလား။ ဒါမှမဟုတ် သင့်ကိုမြင်တာနဲ့ ရှောင်ပြေးသွားကြလား။ သင်ကရော ငါဟာကလေးတွေချစ်ခင်ရတဲ့ ဖခင်ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူမလား။ ဒါမှမဟုတ် ကလေးတွေကြောက်ရွံရိုသေရတဲ့ ဖခင်ဆိုပြီးဂုဏ်ယူနေမလား။ အလုပ်မှာ ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ အလုပ်မှ အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် ကလေးနှင့် ကလေးးအမေကို ပြုံးပြပြီး အိမ်ထဲဝင်တဲ့ဖခင်လား။ အလုပ်ကပင်ပန်း ဒေါသကထွက် …
ဖုန်းကိုင်သူတိုင်းလို့ မပြောတော့ဘူး..လူတိုင်း လူတိုင်း ဒီပို့ကို ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်သွားပါ။ လက်ကိုင်ဖုန်းကို အိပ်ယာဘေးချထားပြီး မအိပ်သင့် လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတစ်ခုကို မိတ်ဆွေများအတွက် မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာ ဟန်းဖုန်းများ ပေါများစွာ ပေါ်ပေါက်လာပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လူတိုင်းနီးပါး အသုံးပြုလာနေကြပါပြီ။ လူအများဟာ အိပ်ယာဝင်ခါနီးမှာ အများဆုံး အသုံးပြုနေကြပြီး ခေါင်းအုံးအနားမှာပဲချထားကာ …